PSJTV | विप्लव समूहद्वारा प्रहरी चौकी कब्जाः के भएको हो सोलुखुम्बुमा ?
विप्लव समूहद्वारा प्रहरी चौकी कब्जाः के भएको हो सोलुखुम्बुमा ?
सोलखुम्बुको सदरमुकाम सल्लेरीबाट २५ कोस टाढा पर्छ महाकुलुङ गाउँपालिका। उक्त गाउँपालिका सोमबार दिनभर राष्ट्रिय राजनीतिको केन्द्रमा परिरह्यो। सञ्चारमाध्यमका लागि त्यो ठाउँ दिनभर चासो र खोजीको विषय बनिरह्यो।
कारण हो गाउँपालिका–३ छेस्काममा रहेको प्रहरी चौकी सरकारले प्रतिबन्ध लगाएको विप्लव नेतृत्वको नेकपाका नेताकार्यकर्ताले रातभर कब्जा लिएको ‘सनसनीपूर्ण समाचार’।
विप्लवका कार्यकर्ता प्रहरी चौकी कब्जा गर्न आएको सूचनापछि त्यहाँ कार्यरत प्रहरी सुरक्षित स्थानमा भागेको, विप्लवका कार्यकर्ताले चौकी पाँच घन्टा नियन्त्रणमा लिएको जस्ता समाचार आइरहे। घटनाको पुष्टि न प्रहरीले गर्‍यो न स्थानीयले। यो खबर आजको अन्नपूर्ण पोष्ट दैनिकमा ओखलढुंगाबाट शिवप्रसाद ढुंगाना र विराटनगरबाट किशोर बुढाथोकीले लेखेका छन्।
स्थानीय बासिन्दाका अनुसार त्यहाँ न विप्लवका नेताकार्यकर्ताले धावा बोलेका थिए, न कब्जा गर्ने उद्देश्यले नै पुगेका थिए। त्यहाँ विप्लवका नेताकार्यकर्ता भने देखिएका थिए।
गाउँपालिकाका अध्यक्ष सागर किराँतीले चौकीमा आक्रमणबारे आफूलाई जानकारी नभएको टेलिफोनमार्फत बताए। उनले केही दिनदेखि गाउँमा बाहिरबाट आएका व्यक्तिको बाक्लो उपस्थिति भने स्वीकारे।
‘गाउँपालिकाको ५ नम्बर वडाको नुर्कुम र अन्य केही ठाउँमा विप्लवका कार्यकर्ताको आउजाउ गरिरहेको रिपोर्ट आएको हो,’ अध्यक्ष किराँतीले भने, ‘नेपाल प्रहरी र सशस्त्रको गस्ती परिचालन भएको छ। तर यहाँ अहिलेसम्म कुनै घटना भएको छैन।’
छेस्काममा सातजना प्रहरी रहे पनि आइतबार असईको कमान्डमा चार जना मात्रै थिए। उनीहरुले आक्रमण गर्ने संकेत पाएपछि प्रहरी चौकी छोडेर आफैं सुरक्षित बसेका मात्र हुन्।
विप्लवका नेताकार्यकर्ताको बाक्लो उपस्थितिले त्यहाँ हुन सक्ने सम्भावित घटना नियन्त्रण गर्ने र उनीहरूका गतिविधि अध्ययन गर्ने उद्देश्यले अहिले त्यस क्षेत्रमा सुरक्षाकर्मीको संख्या बढाइएको छ।
थप मद्दतका लागि नेपाली सेनाको हेलिकप्टरमार्फत १ नम्बर सशस्त्र प्रहरी गण मुख्यालय रानी विराटनगरबाट डीएसपीको नेतृत्वमा ५० र केन्द्रीय प्रहरी विशेष कार्यदलबाट ३० गरेर ८० जना प्रहरीको विशेष टोली सोलुखुम्बु पुर्‍याइएको छ।
बाहिरबाट लगिएको र जिल्लाभित्रकै सुरक्षा टोलीले विभिन्न ठाउँमा सर्च अभियान सुरु गरेर विप्लव समूहका कार्यकर्ताको खोजी तीव्र पारेको जनाइएको छ।
नेपाल प्रहरीका केन्द्रीय प्रवक्ता डीआईजी विश्वराज पोखरेलले विप्लवका कार्यकर्ताले सोलुखुम्बुको चौकी कब्जा गरेको र आक्रमण प्रयास गरेको कुनै जानकारी नभएको बताए।
‘त्यहाँको सुरक्षा व्यवस्था कडा पारिएको छ,’ उनले भने, ‘प्रहरी कतै गस्तीमा निस्किएका बेला कोही नयाँ मान्छे चौकी छेउछाउ हिँडेका कारण ‘विप्लव’ कै कार्यकर्ता हुन् कि भनेर स्थानीयले आशंका व्यक्त गरेका हुन सक्छन्।’ गाउँपालिकाको गुँदेलमा विप्लवले तालिम केन्द्र नै चलाएको चर्चा सुरक्षा निकायमा छ।
त्यस क्षेत्रमा नेपाल प्रहरी र सशस्त्र प्रहरीले पैदल र हेलिकोप्टरबाट निगरानी गरिरहेको एक सुरक्षा अधिकारीले बताए। छेस्काम, गुँदेल, बुँगलगायतका क्षेत्रमा सुरक्षा निकायाले हवाई गस्ती गरिरहेको छ।